Soo bandhigid - Hoygamaansada
Kii Goofiyee Jaray
Gar hadaan la eexayn
Gurigiis ninkii gubay
Gablan Hooyadii baday
Maxaa libinta iyo guul
Iyo shafta gabigeed
Guudkiisa loo sudhay?
Gaajo Kii na badayee
Geedihii badnaa iyo
Gam ka siiyay badidood
Maxaa hees giraanliyo
Giblo loogu tumayaa?
Ugaartii u gaarkiyo
Gooni noo ahaydee
Laynagu garani jiray
Ninkii goofiyee jaray
Maxaa geesi loo yidhi
Garaadkiyo wax garashada
Maxaa gooni uga dhigay?
Midka dumarka gaadee
Boob ku gubay walaashii
Ee god ku riday ayaydii
Maxaa gaar u siiyoo
Ugu soocay goonida?
Gaalka Ilaahay diidoo
Ku gafaya rasuulkoo (SCW)
Oo gabi quraankiyo
Guud ahaan saxaabada
Maxaa libin si gooniya
Loogu geeda waabaa?
Qalbi gabi ahaantii
Kaba maran garaadkiyo
Guud ahaan wax garashada
Gobo’ khayra aan wadan
Nina geed ma saaroo
Janadii ma geeyee
Bal garwaaqso xaajadan
Waxaan uga goleeyahay
Malabkaa la goostaa
Ku gaarayn macaankoo
Qaarna waa sun gubanoo
Gam ka siin makhluuqaba
Bal giraanta fahanoo
Garaad kaaga maaloo
Xaajada aan geed sudhay
Gunta meel u soo saar
Curiyay: © Fadumo Yusuf "Derbi"
Gar hadaan la eexayn Gurigiis ninkii gubay Gacalkiina Gawracay Gablan Hooyadii baday Maxaa libinta iyo guul Iyo shafta gabigeed Guudkiisa loo sudhay? Gaajo Kii na badayee Geedihii badnaa iyo Nabaadkiiba gooyee Gam ka siiyay badidood Maxaa hees giraanliyo Giblo loogu tumayaa? Ugaartii u gaarkiyo Gooni noo ahaydee Laynagu garani jiray Ninkii goofiyee jaray Maxaa geesi loo yidhi Garaadkiyo wax garashada Maxaa gooni uga dhigay? Midka dumarka gaadee Boob ku gubay walaashii Ee god ku riday ayaydii Macooydiina gawraacay Dhamaanteedba gobanimo Maxaa gaar u siiyoo Ugu soocay goonida? Gaalka Ilaahay diidoo Ku gafaya rasuulkoo (SCW) Oo gabi quraankiyo Gabdhihii rasuulkiyo Guud ahaan saxaabada Goldalooladood raba Maxaa libin si gooniya Loogu geeda waabaa? Qalbi gabi ahaantii Kaba maran garaadkiyo Guud ahaan wax garashada Gobo’ khayra aan wadan Nina geed ma saaroo Janadii ma geeyee Garaadkaaga dhuuxoo Bal garwaaqso xaajadan Waxaan uga goleeyahay Geedabhaba qaarbaa Malabkaa la goostaa Ku gaarayn macaankoo Qaarna waa sun gubanoo Gam ka siin makhluuqaba Aadamuhuna gadaasuu Midba gooniyahayee Bal giraanta fahanoo Garaad kaaga maaloo Xaajada aan geed sudhay Gunta meel u soo saar Curiyay: © Fadumo Yusuf "Derbi"
Waxaa qoray Fadumo Yusuf